Corona ဗိုင်းရပ်စ်: 252 ပြန်လည်ကောင်းမွန်ထားပါတ) | Apg29
Corona ဗိုင်းရပ်စ်: 252 ပြန်လည်ကောင်းမွန်ထားပါတ)
ရုပ်ပုံ: Aftonbladet ။
အခုက, Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်အတူမကျန်းမမာ 11.373 ။ သူတို့၏အမျိုးအ, 259 သေဆုံး, ဒါပေမယ့် 252 ပြန်လည်ကောင်းမွန်ပြီတကား
Jonkoping အတွက် Corona ဗိုင်းရပ်စ်
မနေ့ကငါဆွီဒင်ရုံ coronavirus ၏၎င်း၏ပထမဆုံး CONFIRM ကိစ္စတွင်လက်ခံရရှိခဲ့သည်, တစ်ဦး 20 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးမှာအထီးကျန်ကြောင်းထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ Jonkoping အတွက် Ryhov အတွက်ခရိုင်ဆေးရုံ ။ ငါ Corona ဗိုင်းရပ်စ်အပေါ်ကြီးပြင်းခဲ့ကြနှစ်ခုတိုက်ရိုက်ဗွီဒီယိုကို။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုများထဲတွင် အဘယ်ကြောင့်သူတို့က coronavirus နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုတွှေ?
အစောပိုင်းအပေါ်ငါအရမ်းခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်ကျယ်ဝန်းထင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါ Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်မသေပါဘူးစေသည်အားလုံး။ သူတို့အားများစွာသောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က်တုပ်ကွေးသေဆုံးသွားတူသောကွယ်လွန်သွားကြပါပြီသူများသည်, Multi-နေမကောင်းလူတွေခဲ့ကြပြီ။ အခုတော့ coronavirus တိုးတက်မှုအတွက်ကြောင်းစတင်သည် ပုံမှန်ရာသီအလိုက်တုပ်ကွေးရောဂါ ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်, ဆွီဒင်သေမင်း၏ရာပေါင်းများစွာ ။ ကလူတက်ကြောင်းတွှေမဟုတ်ခဲ့လျှင်နှင့်မြင့်မားသောအဖြစ်သတင်းပို့ခဲ့သည်။
Jönköpingအတွက် 20 နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအသေခံငယ်ရွယ်ဖြစ်ကောင်းခိုင်မာတဲ့နှင့်မဟုတ်ပါဘူး။ သူမသည်အရှင်မကြာမီ recover ပါလိမ့်မယ်။
အခုတော့ 11.373 အဆိုပါ Corona ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနှင့်အတူမကျန်းမမာ ။ သူတို့၏အမျိုးအ, 259 သေဆုံး , ဒါပေမယ့် 252 ပြန်လည်ကောင်းမွန်ပါပြီ !
ယေရှု၌ယုံကြည်သူကိုငါတို့သည် ထောက်. , ကြောက်ခြင်းနှင့် coronavirus ၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေမည်မဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဖြစ်ပျက်သမျှ, ယေရှုခရစ်၌ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့ကငါ့ထံသို့ Rune ကအဘိုးကိုခေါ်။ အဆိုပါ coronavirus ၏အကြောင်းရင်းအားဖြင့်, သူသည်ငါ့ကိုတို့သည်ကြီးစွာသောကျမ်းစာ၌ပါအပ်ပေးတော်မူ၏:
ဆာ 91:5သငျသညျမကွောကျပါလိမ့်မယ် တစ်နေ့6ခြင်းဖြင့်ယင်ကောင်သောမြှားညဉ့်အခါအားဖြင့်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအမရ ဘေးဥပဒ်မဖြစ် သည်မှောင်မိုက်သို့မဟုတ်မွန်းတည့်အချိန်၌ဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်ဘေးဥပဒ်၌သွားလာ၏။
ဆာလံကမျြး 91: 1 သူသည်အနန္တတန်ခိုးရှင်၏အရိပ်ကိုခိုအောက်မှာအမွငျ့ဆုံးသောပြည်ခိုင်ဖြိုးမှီခိုရာတော်၌နေသော,2ကြောင်းသူကပြောပါတယ်: "သခင်ဘုရားငါခိုလှုံရာ, ငါ၏ရဲတိုက်အကြှနျုပျ၏ဘုရားသခငျ, ငါသည်ယုံကြည်မှုဖြစ်၏။ "3သူရကြလိမ့်မည် မုဆိုး၏ကျော့ကွင်းထဲကနေနှင့်အဖျက်ဘေးဥပဒ်မှသင့်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူ ။ မိမိအတောင်တော်အမွေးနှင့်အတူ4သူသည်မိမိအတောင်အောက်၌သင်သည်လုံခြုံစွာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်, သင်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။ သစ္စာတော်ကိုတစ်ဒိုင်းလွှားဖြစ်ပါတယ်။
"ယေရှု, ငါသည်ယခုသင်လက်ခံရရှိနှင့်သခင်အဖြစ်သငျသညျဝနျခံ။ ငါဘုရားသခင်သည်သေခြင်းမှသင်သည်ထမြောက်တော်မူသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ယခုတွင်ငါသည်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သူဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်သည်ငါ့ကိုအပြစ်မှလွှတ်ခြင်းနှင့်ယခုတွင်ငါသည်ဘုရားသခင့ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အာမင်။ "